RASMI: Dani Ceballos oo ku biiray kooxda Real Madrid + Sawirro – Gool FM
RASMI: Dani Ceballos oo ku biiray kooxda Real Madrid + Sawirro
(Madrid) 14 Luulyo 2017 – Real Madrid ayaa dhamaystirtay saxiixa laacibka aadka loo qiimeeyo ee khadka dhexe uga dheela Betis ee Dani Ceballos oo ay la galeen qandaraas 6 sanadood kaddib markii ay bixiyeen lacagtii lagu fasaqayay qandaraaskiisii hore.
20-jirkan ayaa u wareegi doona kooxda Madrid oo miiska saartay €15m oo lagu baabi’iyay qandaraaskiisi Estadio Benito Villamarin, waloow ay lacagta uu ku tegayo ay hadhoow ku dhowaan doonto €18m.
Waxaa wada xaajoodka turaanturro ku ahaa ismari waa ku aadana qaab lacagta loo bixinayo iyadoo ay Cagaar Cadaanka ama Los Verdiblancos ay ku adkaysanayee in lacagta hal mar la siiyo halkii loo yaryareeyn lahaa, waana sida haatan dhacday.
Barcelona iyo Juventus ayaa iyaguna aad u xiisaynayay xiddig-yarahan oo ka mid ahaa xiddigihii Spain u metelayay Under 21, balse haatan waa ka quusteen.
Juventus oo bedelka Bonucci u doonaysa Thiago Silva